| 2021 Aug 14 | 10:02 am	3865
काठमाडौं: द्धापर युगमा आर्यव्रतमा सर्वशक्तिशाली देश थियो । हस्तिनापुर । यतिबेलाको संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तै वैभव थियो । त्यतिबेलाका सर्वाधिक शक्तिशाली परशुरामलाई समेत पराजित गर्ने सामाथ्र्य बोकेका भीष्म पितामह हस्तिनापुर दरवारका अभिभाक थिए ।
जसले भगवानबाट इच्छा मृत्युको बरदान पाएका थिए । धर्नुविद्यामा पारंगत गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुरको रक्षा कवच बनेका थिए । कहिल्यै नमर्ने बरदान पाएका ब्रमस्त्रधारी अस्वस्थामा पनि हस्तिनापुरका रक्षाकवच थिए । विदुर जस्ता महाज्ञानी मन्त्री थिए । यस बाहेक कर्ण, अर्जुन लगायतका धर्नुवीर । भीम, दुर्योधन लगायत मल्लयुद्धमा अपराजेय बलवान समेत हस्तिनापुरमा थिए । परमसत्यवादी युधिष्टर थिए । ज्ञानी ऋषि महर्शीहरु पनि त्यतिकै थिए ।
अरु देशहरुलाई चुड्किीको भरमा आफ्नो देशमा समाहित गर्न सक्ने सामाथ्र्य बोकेको हस्तिनापुर अखिर आँफै चकनाचुर भयो । हस्तिनापुरका महान योद्धाहरु महान ज्ञानीहरु जब एकले अर्कोलाई सिध्याउने अभियान अन्तर्गत कुरु क्षेत्रको मैदानमा लडाँइ लडे । त्यो लडाँइले हस्तिनापुर ध्वस्त बनायो । यहि रोगका कारण अहिले नेकपा बिभाजन भई एमालेले हस्तिनापुरको नियती बेहोर्दै छ।
कतै नेपाली कांग्रेसले पनि त्यही हस्तिनापुरको नियती बेहोर्दै त छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । हस्तिनापुर सँग जे थियो नेपाली कांग्रेससँग पनि त्यही छ । नेपाली कांग्रेससँग अहिले पनि यस्ता नेताहरु छन् जसको अगाडी अरु पार्टीका सबै नेताहरु तौलिने हो भने पनि पुग्दैन ।
सन् १९९० मा शीत युद्धको समाप्ति पछि विश्वमा राज्य नियन्त्रित उद्योग व्यवसायको युग समाप्त भयो । ठीक त्यहीबेला नेपालमा पनि डा. रामशरण महतले राज्यनियन्त्रित उद्योग व्यवसायको युग समाप्त गरी नेपाललाई उदार अर्थतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गराए । डा. महतको त्यो नीतिलाई झलनाथ खानल र केपी ओलीले मात्रै होइन कम्युनिष्ट क्रान्तिको सपना बोकेका पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईले समेत अनुसरण गरे ।
तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा हेर्ने हो भने पिएचडी गरेका नेताहरुको संख्या एकदर्जन भन्दा माथि छ । स्नातकोत्तर उत्रिर्ण नगर्नेहरुको संख्या नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समिति भित्र नगण्य छ । आरक्षणको कोटामा केन्द्रिय सदस्य बन्नेहरुमध्ये पनि धेरैले पिएचडी तथा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राजनीतिक संघर्षका हिसावले भन्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि कठोर संघर्ष गर्नुका साथै ९ वर्ष जेल जीवन विताएका छन् । वरीष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ वर्ष जेल जीवन विताएका छन् ।
तर त्यो हस्तिनापुर जस्तै यो नेपाली कांग्रेसको सामाथ्र्य पनि आपसी मनमुटाब र भागबन्डाका कारण दिन प्रतिदिन क्षीण बन्दै गएको छ । यो अथाह शक्ति हुँदा हुँदै पनि यतिबेला नेपाली कांग्रेस अत्यन्त निरिह र कमजोर देखिएको छ । जसरी राजाधृतराष्ट्रको कमजोरीका कारण हस्तिनापुर ध्वस्त भएको थियो त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस ध्वस्त हुँदै त छैन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला जोडतोडका साथ उठेको छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा अन्योल भएकोले कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको हो कि ? भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यर्थाथता त्यस्तो छैन । अहिले मुलुकमा जुन प्रकारको शासन व्यवस्था छ त्यो नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकाल देखिकै लक्ष हो । नेपाली कांग्रेसको त्यही लक्ष्यमा मुलुकका सबै पार्टीहरु आइपुगेका छन् । अर्थात नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकाल देखि जुन सिद्धान्तका लागि लडाँइ गरेको थियो त्यो सिद्धान्त यतिबेला मुलुकका सबै पार्टीहरु आएका छन् ।
मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक सिद्धान्त तथा आर्थिक सिद्धान्त लागू हुनु तर नेपाली कांग्रेसको भुमिका कमजोर हुनु भनेको नेतृत्वकै कमजोरी हो भनेर भन्ने स्थिति छैन । मुलुकको शासन संचालनको बागडोर पाएको बेला अथवा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अवशर पाएको बेला चुकेका कारण अहिले नेपाली कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको हो कि ? भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यर्थाथता त्यस्तो देखिँदैन ।
विगत ७५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने इतिहासमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो जिम्मेवारी तथा भूमिकामा कहिल्यै असफल भएको देखिँदैन । मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको देखिन्छ । विपि काइरालाले के गरे ? भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । सुवर्णशमशेर राणाले मुलुकबाट जमिनदारी प्रथा उन्मुलन गरे, समाजवादी ढाँचाको आर्थिक सिद्धान्त दिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था उन्मुलन भयो । एक वर्ष भित्रै नयाँ संविधान ल्याएर आम निर्वाचन गरायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा गणतन्त्र आयो, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सुशील कोइरालाको पालामा संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान निर्माण भयो, जुन काम सम्पन्न गर्न कम्युनिष्ट नेतृत्वका चार–चार वटा सरकार असफल भएका थिए पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरे र हाम्रो संबिधानलाइ रक्षा गरे ।
अब स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन ७,८ महिना , आउन बाँकी छ । तर कोरोनाको कारण समयमै अधिबेशन हुन सकेको छैन। यदी भदौ भित्र अधिबेशन हुन सकेन भने कांग्रेसको महाधिबेशन र स्थानीय तहको निर्वाचनको समय जुध्छ । महाधिबेशनका सन्दर्भमा आपसी चुनाव लड्दाको तुष स्थानीयतहको निर्वाचनमा पोखिन्छ । घात अन्तर्घात स्वभाविक रुपमा बढ्छ । जसले गर्दा काँग्रेसको हैसियत अहिलेको भन्दा पनि गिर्ने सम्भावना बढ्छ बेलैमा नेता हरुले सोच्न जरुरि छ।
कानुनद्धारा निर्धारित मिति अर्थात् आगामी भदौ भित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरोनाको कारण नियमित मितिमा १४ औँ महाधिवेशन गराउन सक्ने स्थिति छैन । नियमित मितिमा १४ औँ महाधिवेशन हुने सम्भावना अब टरिसकेको छ ।
माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि अव स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन धेरै बाँकी छैन । तर कोरोनाको कारण भदौमा अधिबेशन हुने स्थिति देखिदैन स्थानीय निर्वाचन आउनु भन्दा ६ महीना अघि मात्रै कांग्रेसको गाउँ तथा जिल्ला अधिवेशन हुने देखिन्छ ।
गाउँ तथा जिल्ला अधिवेशनमा आपसी चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण तिक्तता त हुन्छ नै । तिक्तताको आलो घाउ लिएर स्थानीयतहको चुनावमा जाँदा अन्तरघात हुने अवस्थालाई रोक्न सकिन्न । यसैले नेपाली कांग्रेसले हिँजो पनि अन्तरघातका कारण चुनाव हारेको थियो । त्यसकारण सबैजनाले आपसी तिक्ततालाई छोडेर स्थानीय निर्वाचनलाई मध्य नजर गर्दै कानुनी अड्चनलाई मिलाई स्थानीय निर्वाचन पछि महाधिबेशन गर्नु उत्तम हुने छ।
लेखक नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति तथा समन्वय विभागका केन्द्रिय सदस्य हुन्।